३२ वर्षदेखि नवीकरण भएन नेपाल–चीन सीमा प्रोटोकल
२०७७ असार ११ बिहीबार ०४:४४:००
सीमा प्रोटोकल नवीकरणका लागि गठित नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समितिको बैठक पनि १० वर्षयता बसेको छैन
नेपाल र चीनबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीमा छलफल गर्ने सहमति भए पनि तीन दशकदेखि बाउन्ड्री प्रोटोकल नवीकरण हुन सकेको छैन । सीमा व्यवस्थापनका विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको दश महिनाअघि नेपाल भ्रमणमा र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो चीन भ्रमणमा चर्चा भएको छ । तर, ३२ वर्षदेखि दुई देशबीच सीमा प्रोटोकल नवीकरण हुन सकेको छैन । यससम्बन्धी द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।
चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङ गत २६ र २७ असोजमा नेपाल भ्रमणका वेला दुई देशबीच सीमा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सम्झौता भएको थियो । उच्चस्तरीय वार्तापछि २७ असोजमा जारी नेपाल–चीन संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नं. ९ मा सम्झौताप्रति उच्च नेतृत्वले सन्तुष्टि व्यक्त गरेको र सम्झौताले दुवै पक्षबीच सीमा व्यवस्थापन र सहकार्य थप सुधार हुने अपेक्षा गरेको उल्लेख छ ।
तर, त्यसयता संयुक्त सीमा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन । स्रोतका अनुसार ०६८ मा नेपालले अन्तिम समयमा बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने बताएकाले नेपालबाट यसको पहल हुनुपर्ने चीनको मनसाय छ । नेपालले यसका लागि सार्थक प्रयास नगरेको सरकारी स्रोतले बतायो ।
चीनसँग १९६१ अक्टोबर ५ मा सीमासम्बन्धी सन्धि भएको थियो । नेपालबाट राजा महेन्द्र र चीनबाट राष्ट्रपति ल्यू साओचीले सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसको तीन वर्षपछि १९६३ मा दुई देशबीच बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि सन् १९७९ र १९८८ मा गरी जम्मा दुईपटक बाउन्ड्री प्रोटोकल नवीकरण भयो भने त्यसयता नवीकरण भएको छैन ।
दुई देशका परराष्ट्रसचिवस्तरीय द्विपक्षीय संयन्त्रको बैठकमा पनि यसबारे छलफल भएको थियो । तर, यससम्बन्धी छलफल गर्ने सहसचिवस्तरीय बैठक बस्न सकेको छैन । बैठक बस्न नसक्दा दोलखाको लामाबगरमा नेपाली भूमिमा सीमास्तम्भ परेको विषयमा छलफल हुन सकेको छैन ।
सन् १९८८ मा नेपालबाट परराष्ट्रमन्त्री शैलेन्द्र उपाध्यायको नेतृत्वमा १३ जनाको नेपाली टोली चीन गएको थियो । त्यसवेला बाउन्ड्री प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको त्यहाँ सहभागी भएका नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
सीमासम्बन्धी प्रोटोकल नवीकरणलगायतका विषयमा छलफल गर्न दुई देशबीच सन् २००६ मा नेपाल–चीन संयुक्त सीमा समिति गठन भयो । दुवै सरकारले समितिलाई यथाशीघ्र प्रोटोकल नवीकरण गर्न म्यान्डेट दिइएको थियो ।
नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी प्रोटोकल नवीकरणबारे पछिल्लो बैठक २०१० अप्रिल ४ देखि १० सम्म काठमाडौंमा संयुक्त सीमा समितिको बैठक बसेको थियो । नेपाली टोलीको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव मुक्तिनाथ भट्ट र चीनका तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सन्धि तथा कानुन विभागका काउन्सिलर अऊ गुयाङ युगिङले गरेका थिए ।
बैठकले ०६८ मा सीमासम्बन्धी वार्ता चीनको सियान सहरमा बस्ने तय गरेको थियो । चिनियाँ राष्ट्रपति सीको गृहनगर सियानमा जान तयार भएको नेपाली टोलीलाई सरकारले अन्तिम समयमा रोकेको थियो
सन् २०१२ फेबु्रअरी १ देखि ५ (०६८ माघ १८ देखि २२)सम्म चीनको सियान सहरमा नेपाल र चीनबीच सीमासम्बन्धी वार्ता तय भएको थियो । परराष्ट्र स्रोतका अनुसार नेपाली टोली चीन जाने तयारी अवस्थामा रहेको थियो, तर गृहकार्य नपुगेको भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा चीन जाने टोली रोकियो । त्यसपछि संयुक्त सीमा समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।
नापी विभागका पूर्वमहानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार दोलखा लामाबगर गाविसको लेप्चा गाउँस्थित कोर्लाङपारि हिमालको टिप्पाचुलीमा चिनियाँ पक्षले सीमा चिह्न नेपालतिर सारेपछि विवाद उत्पन्न भएको थियो । यो विवाद अझै समाधान भएको छैन । सो क्षेत्रमा सीमाचिह्न नं. ५७ नेपालतिर सरेको भेटिएको थियो । लामो समय फेला नपरेको सो सीमाचिह्न नेपालतिरको एउटा पहरोमा खोपिएको अवस्थामा ०६२ मा भेटिएको थियो । त्यहाँ ९ बिघा नेपाली जमिन वर चीनले सीमा चिह्न राखेको थियो । यो विवाद अझै समाधान भएको छैन ।
चीनले सगरमाथाको उचाइ तीन दशमलव १६ मिटर घटी (८ हजार ८ सय ४४.८४) हुनुपर्ने दाबी गरेको थियो । तर, नेपालले साविक उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर नै यथावत् हुनुपर्ने दाबी गर्दै आएको थियो । २००१ मा अमेरिकाले सगरमाथाको उचाइ दुई मिटर थपिएर आठ हजार आठ सय ५० पुगेको दाबी गरेको थियो । नेपालले अमेरिकी र चिनियाँ दाबीलाई स्वीकार गरेको छैन ।
यसपालि नेपाल र चीनले बेग्लाबेग्लै सगरमाथाको उचाइ मापन गरिरहेका छन् । यद्यपि, यसमा चीन र नेपालबीच सहकार्य भने छैन । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणका वेला सगरमाथाको उचाइ एकैसाथ घोषणा गर्ने सहमति भएको छ । नेपालले आफैँ सगरमाथाको उचाइ मापन गरिरहेको छ ।
उचाइ मापनका लागि नापी विभागको प्राविधिक टोली सगरमाथाको शिखर आरोहण गरेर फर्किसकेको छ । अहिले तथ्यांक प्रशोधन गर्ने काम भइरहेको नापी विभागका प्रवक्ता दामोदर ढकालले बताए । चिनियाँ टोली पनि एक महिनाअघि उत्तरी मोहोडाबाट सगरमाथाको शिखर आरोहण गरेर बेइजिङ फर्किसकेका छन्।
#नवीकरण # नेपाल–चीन सीमा प्रोटोकल
म्यानपावर कम्पनीको नवीकरणमा सहजीकरण गरिदिन श्रम मन्त्रालयलाई उद्योग समितिको निर्देशन
बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत एक वर्षका लागि म्यानपावर कम्पनीहरूको नवीकरण गरिँदै
उड्डयन क्षेत्रमा काम गर्ने सबैको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने म्याद थप
निर्माण व्यवसायीको फर्म नवीकरणका लागि असार मसान्तसम्मको म्याद थप